Caawinta Diinta ee Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo-sareysa Caawinta Fasaxa ugu wanaagsan ee ku jirta Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Muxuu kuu Sameeyaa Qoraa Qeexitaan
Waxaad isku dayi laheyd inaad sameysid buugaagtaada oo aad la dagaallanto waxyaabo kugu cusub oo aad kuugu adag. Ama waxaad u aadi kartaa jihada kale oo aad ka iibsan kartaa caawinta qoraalka oo aad uga baahan tahay qoraa ku takhasusay qoritaanka qoraalka. Mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee loo maro helitaanka caawimaadda aad ugu baahan tahay sameynta qoraalkaaga ayaa ah inaad shaqaaleyso adeegga kaalmada daabacadda. Waxaa jira tiro adeegyo kala duwan ah oo halkaa ka jira, helitaanka midkaana oo bixiya adeegyo badan oo kala duwan ayaa kuu oggolaanaya inaad hesho heerka taageerada aad u baahan tahay.
Taageeradu waa shay laga yaabo inaadan hore uga fikirin markay tahay dhammaystirka buugaaga. Haddii aad ku dhex jirto qoraalkaaga, way adkaan kartaa in la ogaado waxa xiga ee la sameynayo ama meesha loo socdo si loo helo taageerada aad u baahan tahay. Haddii aad abuuri lahayd buugaag kuu gaar ah, taageerada aad heli lahayd waxay noqon kartaa mid qiimo leh, gaar ahaan markaad tixgeliso dhibaatooyinka kugu soo maray intii aad ka shaqeynaysay buugaaga.
Habka ugu fiican ee loo maro helitaanka adeegga ku siin doona taageerada buugaagta aad u baahan tahay waa inaad la hadasho dhowr qof oo kala duwan ka hor intaadan gaarin go'aanka ugu dambeeya. Samee liis su'aalo ah oo aad weydiiso mid kasta oo ka mid ah dadka aad wareysanayso. Weydii haddii ay awood u yeelan doonaan inay ku siiyaan muunad ka mid ah shaqadooda, oo waydii muddada ay ku qaadanayso inay soo saaraan qoraal ay kuu tixraaci karaan. Kuwani dhammaantood waa su'aalo aad u baahan tahay inaad si faahfaahsan uga jawaabto si aad si sax ah u ogaato waxa laga filayo. Haddii aad ogaato in adeeg aad ka fiirsanaysid uusan ku siinaynin taageerada noocan ah ama uusan ku siin karin shaybaar tijaabo ah, markaa waa inaad u gudubtaa mid kale.
Qaab kale oo lagu helo caawimaadda qoraalku waa adoo fiirinaya khadka tooska ah. Waxaa jira meelo badan oo kala duwan oo internetka ah oo aad ka heli doonto caawimaad qorista buugaaga, waana tan ugu dhaqsaha badan ee lagu helo caawimaadda qoraalka ee aad u baahan tahay. Qaar ka mid ah kuwa fiican ayaa ku siin doona shaybaar tijaabo ah oo bilaash ah, kaas oo kuu oggolaanaya inaad aragto sida ay u ekaan doonaan iyada oo aanad dhab ahaantii iibsan dhammaan hagaha qoraalka ee aad xiisaynayso
Qoritaanka qoraalku maahan wax sahlan, laakiin haddii aad ku dhibtooneysay qorista buundada in muddo ah hadda, waa waqtigii aad caawimaad heshay. Haddii aad ka shaqeyneyso qoraalkaaga adigu kaligaa ama adeegso adeegga qoraalka qoraalka, waxaad u baahan doontaa inaad hesho qof khibrad u leh qoraalka noocan ah. inuu ku caawiyo. Waxaa jira ilo fara badan oo ku siin kara adeegga qoritaanka shahaadadaada, laakiin waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad si xikmad leh u dooraneyso.
Hubso in adeegga aad dooratay uu yahay mid la isku halleyn karo. Tani waxay ka dhigan tahay inay ku siin doonaan lacag celin haddii aadan ku qanacsanayn kaalmadooda buugaagta. Adeeg qoraal qoraal ah oo sumcad leh ayaa yeelan doona sumcad aad u wanaagsan wuxuuna ku siin doonaa 100% lacag celin dammaanad ah.
Adeeg ku siinaya dammaanad qaadka adeegyadooda qorista buuga ayaa ka dhigan inay ku kalsoon yihiin awooddooda inay kaa helaan gargaarka aad u baahan tahay. Iyagu ma raadinayaan inay kaa faa’iideystaan. Haddii aad shaki ku jirto, waxaad u baahan doontaa inaad talo ka hesho qof ku soo guuleystay adeegga noocan ah, si aad si dhab ah u ogaato waxa laga filayo.
Muhiim ma aha in aad bixiso adeegyada laguu qabtay, laakiin haddii aad shaki ka qabto, waxaa laga yaabaa inaad marka hore baarto xulashooyinka kale. Adeeg qoraal qoraal ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa ku siin kara taageero iyo hagitaan kaa caawin doona inaad ku dhammaystirto qoraalkaaga waqtiga ku habboon.